Top 10 Amakhasino E-inthanethi i-Citadel 2022
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-inthanethi amukela i-citadel
Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Citadel
Isungulwe ngo-2000, i-Citadel wuhlelo lokubhenka ku-inthanethi olwaziwa emhlabeni wonke njengendlela ethembekile yokwenza izinkokhelo. Njengamanje isetshenziswa emazweni ahlukene angaphezulu kwangu-33 emhlabeni wonke, izinkokhelo ze-Citadel zethenjwa yilabo abazisebenzisa emakhasino e-inthanethi nasekuthengeni okujwayelekile ku-inthanethi. Uma ukhokha nge-Citadel, ukhetha ukusebenzisa indlela esheshayo nethembekile, yingakho abantu abasha abaningi babhalisela uhlelo nsuku zonke.
I-Citadel iyindlela yokukhokha engafani nenye. Uma uke wasebenzisa izindlela ezifana nekhadi le-debit ikhadi lesikweleti, nama-e-wallet, niyazi ukuthi izinto zivame ukungahambi kahle, uma kuziwa ekuphepheni noma ekululeni kokusebenzisa. I-Citadel wuhlelo oluthatha umsebenzi onzima nokukhathazeka ekukhokheni amakhasino futhi lapho ufuna ukuqala ukudlala, i-Citadel iyindlela enhle yokukhokha ongayikhetha uma ukwazisa ukuphepha, ukusebenzisa kalula nokugcina kuyimfihlo.
Uma ufuna ikhasino eyamukela i-Citadel Instant Banking, asikho isidingo sokubheka ezindaweni eziningi. Sesikufunele konke ukwenza kube lula kuwe ukuba uqale ukudlala emakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika namuhla. Zama la makhasino amahle amukela i-Citadel Instant Banking nge-ZAR.
Isebenza Kanjani i-Citadel Instant Banking?
Lapho ukhetha ukusebenzisa i-Citadel, asikho isidingo sokuthi uvule i-akhawunti, njengoba lokhu kunjenge ndlela yokukhokha hhayi i-ejenti, njenge-e-wallet. I-Citadel ikuvumela ukuthi wenze izinhlobo ezintathu ezahlukile zokukhokha. Uhlobo lokuqala umhlahlandlela wokukhokha ongawulawuniloda noma umsizi okusiza ukuthi ukhokhe usebenzisa i-akhawunti yakho yasebhange ku-inthanethi. Uhlobo lwesibili yinqubo yokukhokha ezenzakalelayo kuwebhusayithi ye-Citadel esebenza ne-akhawunti yakho yasebhange ku-inthanethi ukukusiza ukuthi ukhokhe. Uhlobo lwesithathu uhlelo olusheshayo lapho uthola khona inombolo eyinkomba bese wenza izinkokhelo usebenzisa i-akhawunti yakho yasebhange ku-inthanethi usebenzisa leyo nombolo eyinkomba.
Nakuba lezi izinqubo zizwakala ziyinkimbinkimbi kancane, ukuzisebenzisa kulula futhi uma uke wazama uhlobo olunye kanye, uzobona ukuthi zihlelelwe abantu abahlukile. Lokhu kusho ukuthi ungakhetha indlela esebenza kangcono kuwe lapho wenza inkokhelo emakhasino e-inthanethi amukela i-Citadel, kunokuba ukhethe indlela eyodwa ebhalisiwe.
Ukudiphozitha nokukhipha imali emakhasino e-inthanethi e-Citadel
Uma usukulungele ukwenza idiphozithi ekhasino ye-inthanethi ye-Citadel, ungakhetha izindlela eziningi ezitholakala kuwe, njengoba kuchazwe ngenhla. Okubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi inkokhelo iyashesha futhi ngokukhetha imenyu ethi- “ukubhenka ngokusheha”, bese ukhetha i-Citadel, ungakwazi ukwenza idiphozithi yakho futhi udlale imidlalo ngaphansi kwemizuzu emihlanu. Konke okudingeka ukwenze ukukhetha i-Citadel, ulandele imiyalelo, ufaka inani lediphozithi, bese uchofoza inkinobho ethi “hambisa”.
Uma kuziwa ekukhipheni imali, kungadingeka ukuthi uxoxe nosizo lwamakhasimende ngaphambili kokucela inkokhelo ku-akhawunti yakho ye-Citadel. Noma ungakhipha imali usebenzisa i-Citadel, lokhu akuyona indlela yokukhokha esheshayo, futhi, kwezinye izimo, kunezindleko ezihambisana nayo. Qiniseka ukuthi uxoxa nosizo lwamakhasimende ngaphambili kokucela imali yakho.
Isizathu izinkokhelo nge-Citadel ziwusizo kuwe
Uma kuziwa ekukhokheni imali emakhasino e-inthanethi amukela irandi (i-ZAR), awufinyeleli izindlela ongazikhetha. Njengoba kunjalo, ungahle uzibuze ukuthi yiziphi izinzuzo zokukhetha i-Citadel ezikhona, ngaphezulu kwanoma iyiphi enye indlela yokukhokha. Yebo, ngaphandle kokuthi izinkokhelo ziphephe ngokuphelele futhi zivikelekile, izinkokhelo ozenzayo zizoqedelwa ngemizuzwana. Ngaphezulu kwalokho, asikho isidingo sokunikeza umuntu imininingwane yomuntu siqu, imininingwane yakho eyimfihlo futhi awusoze ukhokhe izindleko zokwenza idiphozithi.
Udinga okunye okuthile okungakukholisa? Yebo, i-Citadel ayikudingi ukuthi ubhalisele ukusebenzisa amasevisi ayo, okusho ukuthi inqubo yokukhokha imfishane kunenqubo ye-e-wallet, njengesibonelo. Njengebhonasi eyengeziwe, i-Citadel nayo inedumela elihle kakhulu losizo lwamakhasimende lwe-24/7, ngakho-ke uma uhlangabezana nezinkinga, udinga usizo lokwenza inkokhelo noma ufuna ukuqonda okujulile ngendlela izinkokhelo ze-Citadel ezisebenza ngayo, okumele ukwenze ukushaya ucingo noma thumela i-imeyili..
Yimaphi amakhasino e-Citadel esiwancomayo Kubadlali baseNingizimu Afrika?
Uma ufuna ikhasino eyamukela izinkokhelo nge-Citadel Instant Banking, asikho isidingo sokubheka ezindaweni eziningi. Sesikufunele konke ukwenza kube lula kuwe ukuba uqale ukudlala emakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika namuhla. Zama la makhasino amahle amukela i-Citadel Instant Banking nge-ZAR.